कोरोना बिमा बारे बन्यो नयाँ मापडण्ड पहिलेनै कोरोना बिमा गर्नुभएको थियो ? अव यस्तो हुन्छ – Sudarshan Khabar
कोरोना बिमा बारे बन्यो नयाँ मापडण्ड पहिलेनै कोरोना बिमा गर्नुभएको थियो ? अव यस्तो हुन्छ
अव १ लाख रुपैयाँको लागि कोरोना बीमा गरेकाले अब २५ हजार रुपैयाँ मात्रै पाउने भएका छन्। आजदेखि लागू हुनेगरी कोरोना बीमाको मापदण्ड संशोधन गर्दै समितिले कोरोना पुष्टिपछि २५ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि औषधि उपचारका लागि हुने खर्च बिल भर्पाईका आधारमा मात्रै दिने भएको हो।
भदौ २८ अघि जारी गरिएका बीमा लेखमा भने पुरानै व्यवस्था लागू हुने छ। अर्थात सो मिति अघि बीमा गरेकालाई पिसिआर पोजेटिभपछि पूर्ण रकम अर्थात् १ लाख वा ५० हजार नै भुक्तानी पाउनेछन्
व्यक्तिगत रुपमा ६ सय रुपैयाँ शुल्क र पारिवारिक रुपमा ३ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाएर १ लाखको बीमा गर्नेले अब कोरोना पुष्टिपछि २५ हजार रुपैयाँ नगद पाउने छन्।
५० हजारको बीमा गर्नेले पनि कोरोना पुष्टिपछि २५ प्रतिशत मात्रै अर्थात १२ हजार ५ सय पाउने छन्। पिसिआर पोजेटिभ रिपोर्ट आउनेवित्तिकै २५ प्रतिशत भुक्तानी दिइन्छ, बाँकी ७५ प्रतिशतसम्म रकम औषधि उपचारमा भएको खर्चको बिल बराबरको भुक्तानी दिइनेछ ।
तर संक्रमित घरमा वा होटलमा बसेको वा खाना खाएको खर्चको बिल भने भुक्तानी नहुने समितिले जनाएको छ। भदौ २८ अघि जारी गरिएका बीमा लेखमा भने पुरानै व्यवस्था लागू हुने छ। अर्थात सो मितिअघि बीमा गरेकालाई पिसिआर पोजेटिभपछि पूर्ण रकम अर्थात् १ लाख वा ५० हजार नै भुक्तानी हुनेछ।
बीमा गर्नेहरुको संख्या उच्च भएपछि समितिले आफ्नो मापदण्ड संशोधन गरेको हो। समितिका अनुसार हालसम्म करिब ४ सय जनाले काेराेना बीमाकाे भुक्तानी लिएका छन् भने १२ सयले क्षतिपूर्तिका लागि दावी गर्दै बीमा कम्पनीहरुमा निवेदन दिएका छन्।
१३ लाखभन्दा बढी संख्याले बीमा गरेको र ७५ करोड रुपैयाँ बराबर प्रिमियम रकम संकलन भएकाे छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको पिसिआर परीक्षण रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिइने भएको छ।
त्यस्तै कोरोना बीमा दावीका लागि आएको निवेदनमा कुनै शंका भएमा त्यसको छानविन गर्नका लागि ‘दावी व्यवस्थापन समिति’ गठन भएको छ। बीमा समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र बीमक संघको प्रतिनिधी सम्मिलित सो समितिले आशंका लागेका रिपोर्टबारे छानविन गर्न सक्नेछ।
कोरोना बीमाको भुक्तानीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन दिएको ७ दिनभित्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। कोरोना बिमा सम्बन्धी नयाँ मापडण्ड बनाएपनि पहिले नै कोरोना बिमा गरेका हरुमा दुविधा छाएको थियो ।
प्रकाशित भएको : September 14th, 2020